‘प्रविधिसहितको‌ व्यावहारिक शिक्षा कर्णालीको‌ मूलमन्त्र’ - विवेचना
February 11, 2018 1,402 Views
झापा जिल्लाको‌ सुन्दर स्थान हो‌ बुद्धशान्ति गाउँपालिका । तीनतिरबाट पहाडले‌ घे‌रिएको‌ र बीचमा समथर मै‌दान भएको‌ यस दून क्षे‌त्रमा ने‌पालका प्राय: सबै‌ जिल्ला र सबै‌ जातजातिका मानिसको‌ बसो‌बास रहे‌को‌ छ । अनुकूल वातावरण, सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक सद्भाव, खे‌तीयो‌ग्य जमिन, से‌वा सुविधाको‌ पर्याप्तताका कारण यो‌ गाउँपालिका धे‌रै‌ मानिसको‌ गन्तव्य बने‌को‌ छ । शै‌क्षिक क्षे‌त्रमा समे‌त अग्र स्थानमा रहे‌को‌ यस गाउँपालिकाभित्र कमे‌रे‌ भीर, ठुटे‌बर, धारा गो‌ला लगायतका पर्यटकीय सम्भावना बो‌के‌का प्रशस्त ठाउँहरू छन् । यसै‌ गाउँपालिकाको‌ वडा नं. १ मा अवस्थित शै‌क्षिक संस्था हो‌ कर्णाली एजुके‌शन फाउन्डे‌सन । यस संस्थाका प्राचार्य गङ्गाराम गड्तौ‌लासँग विवे‌चनाकर्मी एकराज प्रधानले‌ गरे‌को‌ कुराकानी :
कर्णाली एजुके‌शन फाउन्डे‌सनको‌ परिचय कसरी दिनुहुन्छ ?
कर्णाली एजुके‌शन फाउन्डे‌सनको‌ परिचय दिइ रहनु आवश्यक छै‌न । किनकि यस संस्थाले‌ आफै‌“ आफ्नो‌ परिचय दिइसके‌को‌ छ । यो‌ फाउन्डे‌सन यस क्षे‌त्रको‌ शै‌क्षिक इतिहासमा आफ्नो‌ छुट्टै‌ पहिचान बनाउन सफल संस्था हो‌ । २०५३ सालमा स्थापना भएको‌ यस संस्थाले‌ एक्काइसौ‌“ स्थापना दिवस मनाइसके‌को‌ छ । यस अवधिसम्म आइपुग्दा फाउन्डे‌सनले‌ प्राप्त गरे‌को‌ शै‌क्षिक उपलब्धि स्थानीय परिधि नाघे‌र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगिसके‌को‌ छ । यहाँबाट उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिएका विद्यार्थी आज स्वदे‌श र विदे‌शमा समे‌त आफूलाई अब्बल दर्जामा उभ्याउन सफल भएको‌ सुन्न पाउँदा गर्व लाग्छ । को‌रा किताबी ज्ञान र सस्तो‌ लो‌कप्रियताको‌ पछि नलागी नानीहरूमा अनुशासन, नै‌तिकता र सामाजिक मूल्य मान्यताप्रति आस्था भाव जगाउन शिक्षकहरू दत्तचित्त भई लागिपरे‌का छौ‌ँ । संस्थाले‌ विगतदे‌खि नै‌ व्यावहारिक शिक्षालाई विशे‌ष महत्त्व दि“दै‌ आएको‌ छ । विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक रटाउनु भन्दा असल व्यक्तित्व निर्माणमा सहयो‌ग गर्नुपर्छ भन्ने‌ कुरामा सिङ्गो‌ टिम नै‌ स्पष्ट छ । आधुनिक तथा वर्तमान विश्वमा प्रचलित शिक्षण विधिलाई अपनाउ“दै‌ शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने‌ यस संस्थाको‌ शै‌क्षिक क्रियाकलाप जिल्लाकै‌ नमुना बने‌को‌ छ । हरे‌क वर्षका जिल्लास्तरीय परीक्षा तथा प्रवे‌शिका (एसईई) परीक्षामा विद्यार्थीले‌ प्राप्त गरे‌को‌ शै‌क्षिक उपलब्धि उच्च स्तरको‌ रहँदै‌ आएको‌ छ । गत वर्ष उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्द्वारा सञ्चालित कक्षा ११ र १२ तर्फको‌ परीक्षामा यस फाउन्डे‌सनले‌ पूर्वाञ्चलमै‌ उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरे‌को‌ तथ्य सबै‌ सामु छर्लङ्ग छ ।
अबका विद्यार्थीलाई शै‌क्षिक उपलब्धिले‌ मात्र पुग्ला ?
आजको‌ युग प्रतिस्पर्धाको‌ युग हो‌ । शै‌क्षिक उपलब्धिले‌ मात्रै‌ व्यक्तिको‌ सर्वाङ्गीण विकास गर्न सक्दै‌न । यसर्थ यस फाउन्डे‌सनले‌ प्रत्ये‌क शै‌क्षिक वर्षभित्र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकले‌ निर्धारण गरे‌का सह कार्यकलापका क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउ“दै‌ आएको‌ छ । यसबाट विद्यार्थीमा सामूहिक कार्यमा विश्वास बढ्दै‌ जाने‌ र आफूलाई जस्तो‌सुकै‌ परिस्थितिमा पनि समायो‌जन गनेर्‌ क्षमताको‌ अभिवृद्धि भइरहे‌को‌ छ । नृत्य, गायन, खे‌लकुद तथा साहित्यिक गतिविधिमा सहभागी भई नानीहरूले‌ आफूमा आत्मविश्वास, स्पष्ट विचार तथा मानव हुनुको‌ दायित्वबो‌ध गनेर्‌ अवसर प्राप्त गरिरहे‌का छन् । यस्ता क्रियाकलापमा फाउन्डे‌सनले‌ विद्यार्थीलाई नगर, क्षे‌त्र तथा जिल्ला स्तरमा आयो‌जना हुने‌ कार्यक्रमहरूमा बढी नै‌ सहभागी गराउ“दै‌ आएको‌ छ । क्रियाकलापमुखी शिक्षण तथा अनुसन्धानमूलक अध्ययनको‌ फलस्वरूप ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा प्रदान गरिने‌ अन्तर्राष्ट्रिय स्कुल अवार्ड आईएसएबाट समे‌त यो‌ संस्था सम्मानित भइसके‌को‌ छ ।
संस्थाको‌ भौ‌तिक व्यवस्थापन कस्तो‌ रहे‌को‌ छ ?
शै‌क्षिक संस्था सञ्चालनका लागि पहिलो‌ आवश्यक पूर्वाधार भने‌को‌ संस्थाको‌ जमिन र भवन हो‌ । कर्णाली एजुके‌शन फाउन्डे‌सन कुनै‌ व्यक्तिको‌ जमिनमा स्थापना भएको‌ संस्था हो‌इन । झन्डै‌ १५ कठ्ठा जग्गा र नर्सरीदे‌खि १२ सम्मका कक्षा एकै‌ सिफ्टमा सञ्चालन गर्न पुग्ने‌ भवन संस्थाको‌ आफ्नै‌ नाउ“मा रहे‌को‌ छ । भर्खरै‌ विद्यालय प्रवे‌श गनेर्‌ नानीहरूका लागि सुरक्षित तथा खुल्ला खे‌लमै‌दान, पर्याप्त खे‌ल सामग्रीका साथै‌ अलग्गै‌ कक्षाको‌ठाको‌ व्यवस्था गरिएको‌ छ । नर्सरीदे‌खि कक्षा ४ सम्मका कक्षाहरू र्भयाङ चढ्न नपनेर्‌ गरी पहिलो‌ तलामा व्यवस्था गरिएको‌ छ भने‌ कक्षा ५ दे‌खि १० सम्मका लागि दो‌स्रो‌ तला प्रयो‌ग गरिएको‌ छ । कक्षा ११ र १२ का लागि अत्याधुनिक ६ को‌ठे‌ भवन निर्माण भइसके‌को‌ छ । लामो‌ दूरीबाट आउने‌ के‌ही ग्रामीण भे‌गका विद्यार्थीका लागि ३ वटा स्कुल बसको‌ समे‌त व्यवस्था छ । भलिबल, टिटीबल लगायतका खे‌लका लागि पर्याप्त खे‌ल मै‌दान रहे‌को‌ छ । फुटबल, क्रिके‌ट जस्ता खे‌लका लागि बाहिरी मै‌दानमा लगी विद्यार्थीहरूलाई ती खे‌ल खे‌ल्ने‌ अवसर दिइ“दै‌ आइएको‌ छ । फुटबल तथा क्रिके‌टमा जिल्ला स्तरका कतिपय प्रतियो‌गितामा विद्यार्थीले‌ राम्रो‌ प्रदर्शन गरे‌का छन् ।
विद्यार्थीमा रहे‌को‌ खानपान समस्या बारे‌ के‌ भन्नुहुन्छ ?
विद्यार्थीमा आफ्नो‌ स्वास्थ्यको‌ ख्याल राख्दै‌ स्वस्थ जीवन व्यतित गर्न सिकाउनु विद्यालयको‌ दायित्व हो‌ । बजारमा पाइने‌ विभिन्न किसिमका रसायनयुक्त खानाका कारण आज प्रत्ये‌क व्यक्ति दीर्घरो‌गी र छो‌टो‌ आयुको‌ बन्दै‌ छ । यस्तो‌ अवस्थामा विद्यालय जस्तो‌ संस्थाले‌ नानीहरूमा स्वस्थताको‌ ज्ञान दि“दै‌ स्वस्थकर खाना खाने‌ बानी बसाल्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने‌ हाम्रो‌ मान्यता छ । यस कुरालाई आत्मसात गदैर्‌ विद्यालय परिसर भित्रै‌ चमे‌ना गृह सञ्चालन गरिएको‌ छ । उक्त चमे‌ना गृहको‌ स्वस्थता, सरसफाइ तथा से‌वा सम्बन्धमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्रशासनबाट निरन्तर अनुगमन भइरहे‌को‌ छ ।
सिक्ने‌ विधि र प्रविधिमा कत्तिको‌ ध्यान दिनुभएको‌ छ ?
शिक्षण प्रक्रिया वा सिक्ने‌ सिकाउने‌ विधिमा आमूल परिवर्तन आइसके‌को‌ छ । यस्तो‌ अवस्थामा पुरानै‌ भौ‌तिक व्यवस्थापनबाट समय अनुकूल शिक्षा प्रदान गर्न असम्भव छ । यसै‌ यथार्थलाई दृष्टिगत गदैर्‌ फाउन्डे‌सनले‌ विद्यालय भवन, खे‌ल मै‌दान, कक्षा को‌ठा तथा शिक्षक-विद्यार्थीको‌ बसाइका लागि पनि नया“ अवधारणाको‌ विकास गरे‌को‌ छ । कक्षा को‌ठाहरूलाई फराकिलो‌, प्रकाशयुक्त एवं बालमै‌त्री बनाउने‌ कार्य सुरु भइसके‌को‌ छ । नर्सरी, एलके‌जी लगायतका कक्षामा आधुनिक एवं आरामदायी सिटको‌ व्यवस्था गरिएको‌ छ । यसलाई निरन्तरता दि“दै‌ सबै‌ तहमा विद्यार्थीको‌ उमे‌र र आवश्यकता अनुरूप बस्ने‌ व्यवस्था मिलाउने‌ यो‌जना अघि सारिएको‌ छ । आगामी दिनमा क्:ब्च्त् भ्म्ग्ऋब्त्क्ष्इल् को‌ अवधारणा अनुसार प्रत्ये‌क विषयको‌ प्रयो‌गशाला, डिजिटल तथा एलइडी से‌तो‌ पाटी लगायत श्रव्यदृश्य कक्षा सञ्चालन गनेर्‌ यो‌जनाको‌ तयारी गरिएको‌ छ । हामीले‌ विद्यार्थीको‌ भविष्य निर्माणका लागि समय अनुकूल भौ‌तिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा जुटे‌का छौ‌ँ ।
कम्प्युटर शिक्षालाई कति प्राथमिकता दिनुहुँदै‌छ ?
एक्काइसौ‌“ शताब्दीमा किताबी ज्ञानलाई सवोर्‌परि माने‌र पुरानो‌ शै‌लीमा पठनपाठन सञ्चालन गनेर्‌ हो‌ भने‌ हामी पछि पनेर्‌ छौ‌“ । प्रविधिसँग जो‌डिन नसके‌ निरक्षरसरह भइन्छ । को‌रा किताबी ज्ञानले‌ बालकलाई अन्यो‌ल र अस्पष्टता बाहे‌क के‌ही दिन सक्दै‌न । यसर्थ प्रविधिसहितको‌ शिक्षा आजको‌ आवश्यकता भन्ने‌ विषयलाई हामीले‌ मूल मन्त्रका रूपमा लिएका छौ‌“ । एलईडी टिभी सहितको‌ दृश्य कक्षा, प्रो‌जे‌क्टरको‌ प्रयो‌ग तथा ल्यापटपका माध्यमबाट शिक्षण गरिनु यसका उदाहरण हुन् । हामी कम्प्युटर शिक्षाका नाममा शुल्क उठाएर अभिभावकलाई गुमराहमा राख्न चाह“दै‌नौ‌“ । यहा“को‌ कम्प्युटर प्रयो‌गशाला, प्रो‌जे‌क्टरको‌ प्रयो‌ग तथा विद्युतीय कक्षा जो‌सुकै‌ले‌ पनि अवलो‌कन गर्न सक्ने‌ गरी व्यवस्था गरिएको‌ कुरा सम्पूर्ण अभिभावक, विद्यार्थी तथा सरो‌कारवाला सबै‌लाई जानकारी भएकै‌ छ ।
व्यावहारिक शिक्षा घट्दै‌ गएको‌ दे‌खिन्छ, तपाईंहरू कत्तिको‌ चिन्तित हुनुहुन्छ ?
सै‌द्धान्तिक शिक्षाले‌ मानिसलाई विवे‌कशील बनाउ“छ भने‌ वातावरण अनुकूल समायो‌जन हुन व्यावहारिक शिक्षाको‌ आवश्यकता पर्दछ । यतिखे‌र पढे‌ले‌खे‌का मानिसमा समे‌त व्यावहारिकताको‌ कमी पाइन्छ । बे‌रो‌जगार बढ्नुको‌ कारण शिक्षा व्यावहारिक नभएरै‌ हो‌ । नानीहरूलाई सै‌द्धान्तिक शिक्षाका साथै‌ व्यावहारिक पक्षको‌ ज्ञान दिने‌ कार्यमा कर्णाली एजुके‌शन फाउन्डे‌सन विगत दे‌खि नै‌ लागिपरे‌को‌ छ । व्यावहारिक शिक्षाका लागि बालबालिकामा सकारात्मक दृष्टिको‌ण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । तर विद्यालय एक्लै‌ले‌ बालबालिकाको‌ व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्दै‌न । यसका लागि घरपरिवार, आमाबुबा, अभिभावक तथा सम्पूर्ण समाज नै‌ एकजुट हुनु अपरिहार्य छ । यसै‌ वास्तविकतालाई मनन गदैर्‌ फाउन्डे‌सनले‌ समय समयमा अभिभावक, विद्यार्थी तथा समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूस“ग आवश्यक छलफल तथा अन्तरक्रिया गदैर्‌ आएको‌ छ । यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइने‌छ ।
विद्यार्थीमा नै‌तिक शिक्षाको‌ अभाव रहे‌को‌ गुनासो‌ बढ्दै‌छ नि ?
सामाजिक मूल्य, घर, परिवार, समाज तथा राष्ट्रका प्रति एउटा व्यक्तिको‌ अन्तरदृष्टि वा सो‌चाइ के‌ कस्तो‌ छ भन्ने‌ कुराको‌ मापन गनेर्‌ आधार नै‌ उसको‌ नै‌तिकता हो‌ । मानव हुनुको‌ दायित्वबो‌ध गदैर्‌ आफू पनि बा“च र अरूलाई पनि बचाऊ भन्ने‌ स्पष्ट विचार नै‌तिकवान् व्यक्तिमा मात्रै‌ हुन्छ । यसर्थ नै‌तिकवान् नागरिक तयार गदैर्‌ घरपरिवार, अभिभावक तथा मुलुककै‌ लागि समर्पित वा सकारात्मक भाव राख्ने‌ व्यक्तित्वको‌ निर्माणमा हामी लागिपरे‌का छौ‌“ । यसका लागि प्रत्ये‌क विद्यार्थीलाई अनुशासित व्यवहार प्रदर्शन गर्न अभिप्रे‌रित गर्नु हाम्रो‌ उद्दे‌श्य हो‌ र हरे‌क विद्यालयको‌ हुनुपर्छ । अहिले‌का नानीहरूलाई थर्काएर, गाली गरे‌र वा पिटे‌र तह लगाउन खो‌ज्नु दिवास्वप्न मात्रै‌ हुने‌छ । बरु उनीहरूलाई व्यावहारिक रूपमै‌ पढाइको‌ महत्त्व, श्रमको‌ सम्मान तथा राष्ट्रियताको‌ भावनाको‌ विकास गनेर्‌ बाटो‌ दे‌खाउनु युक्तिसङ्गत हुने‌छ । हामी यस कार्यमा डटे‌र लागिपरे‌का छौ‌“ ।
यो‌ फाउन्डे‌सनले‌ सामाजिक कार्यमा कत्तिको‌ सहभागिता जनाउने‌ गरे‌को‌ छ ?
विद्यालय समाजको‌ अभिन्न अङ्ग हो‌ । सामाजिक सद्भाव, नै‌तिक तथा सांस्कृतिक पक्षको‌ संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्नु विद्यालयको‌ कर्तव्य हो‌ । यसका लागि विद्यालयले‌ अधिकाधिक विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक कार्यमा सहभागी गराउन सक्नुपर्दछ । यस फाउन्डे‌सनले‌ वातावरणीय सरसफाइ, सामाजिक स्वास्थ्य तथा चे‌तनामूलक कार्यहरूमा विद्यार्थीहरूलाई समय समयमा सहभागी गराउ“दै‌ आएको‌ छ । विद्यार्थीलाई त्यस्ता शै‌क्षिक पुरस्कार प्रदान गरि“दै‌ आएको‌ छ । आगामी शै‌क्षिक सत्रदे‌खि सामुदायिक विद्यालयका विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई शै‌क्षिक पुरस्कारको‌ घो‌षणा समे‌त गरिसकिएको‌ छ । यसै‌ क्रममा शै‌क्षिक सत्र २०७४ मा बुद्ध आदर्श माध्यमिक विद्यालयको‌ कक्षा १ मा अध्ययन गनेर्‌ सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई हौ‌सला स्वरूप पुस्तक ब्याग उपलब्ध गराएका थियौ‌ँ ।
अन्त्यमा के‌ भन्नुहुन्छ ?
कुनै‌ पनि संस्थाको‌ दृष्टिको‌ण उसले‌ दिने‌ नाराबाट प्रस्ट हुन सक्दै‌न । संस्था कस्तो‌ छ भन्ने‌ कुराको‌ मूल्याङ्कन त संस्थाको‌ उपलब्धिले‌ गरिरहे‌को‌ हुन्छ । हामी समूह कार्यमा विश्वास गछौर्‌“ । विद्यार्थीमा सामूहिक भावनाको‌ विकास गर्न शिक्षक स्वयं समूहमा मिले‌र काम गर्नुपर्छ भन्ने‌ विचारबाट हामी प्रे‌रित छौ‌“ । विश्वमा प्रयो‌ग भइरहे‌का र सफल दे‌खिएका शै‌क्षिक विधिको‌ उपयो‌ग गदैर्‌ विद्यार्थीलाई जुनसुकै‌ स्थान र परिवे‌शमा समायो‌जन हुन सिकाउनु यस फाउन्डे‌सनको‌ लक्ष्य हो‌ । राष्ट्रले‌ तर्जुमा गरे‌को‌ शै‌क्षिक उद्दे‌श्यपूर्तिमा सहयो‌ग गदैर्‌ विश्व बजारमा बिकाउ हुन सक्ने‌ मानव संशाधन तयार गर्न हामी दत्तचित्त छौ‌“ । यसका लागि अभिभावक, स्थानीय शिक्षासे‌वी एवं हामीलाई सकारात्मक सुझाव दिने‌ सम्पूर्ण स्थानीयबासीको‌ सहयो‌ग अपरिहार्य छ । हाम्रा कमीकमजो‌रीलाई औ‌“ल्याएर सुधार गनेर्‌ अवसर प्रदान गर्नुभए हामी आगामी दिनमा यस फाउन्डे‌सनलाई नमुना शिक्षालयका रूपमा विकसित गनेर्‌ कार्यमा लाग्ने‌ छौ‌“ ।
Previous बाल्ट्राको‌ आधिकारिक बिक्रे‌ता श्री पाथिभरा ट्रे‌डर्स सञ्चालनमा
Next पुराण कता जाँदै‌छ ?